ny 19-20 aogositra lsa teo ny fivoriana faha-37 ho an’ireo firenena mpikamban’ny SADC. Filoham-panjakana sy lehiben’ny governemanta ary delegasinona maro avy amin’ny firenena mikambana ao anatin’ny vondrona ara-toekarena ity no niatrika izany. Nisongadina tamin’izany ny fifamindram-pahefana sy fanolorana ny faneva ho an’ny Filoha vaovao hitantana ny SADC, Jakob Gedleyihlekisa Zuma, Filoha Afrikanina atsimo sy ny Mpanjakan’I Swaziland Msawati III, izay nitantana ny SADC teo aloha. Nambaran’i Jacob Zuma tamin’izany fa fotoan-dehibe nahafahana nandinika ny fivoarana sy hametrahana ny fanamby sy ny programa hatao iny fivorian-dehiben’ny SADC andiany faha-37 iny. Nisy kosa ny fanehoan-kevitra nataon’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier momba ny raharaham-pirenena Malagasy, ka nilazany ny tatitra momba ny asa nataon’ireo iraky ny SADC notarihin’i Joachim Chissano teto Madagasikara tamin’ny taon-dasa momba ny filaminana ara-politika. Nambarany fa ao miaina ao anatin’ny fitoniana politika ny firenena, ary isan’ny nitondra ezaka tamin’izany ny vondrona SADC. Noresahiny ihany koa ny resaka fisokafan’ny famatsiam-bola avy any ivelany toy ny fahazoana ny FEC, ny momba ilay 10 miliara dolara nampanantenain’ny mpamatsy vola tany Parisy. Tsy adinony ny momba ny fifidianana ho avy, izay nilazany sy nanamafisany fa efa nanipika amin’ny hisian’ny fifidianana mangaraharaha, demokratika, ary eken’ny rehetra. Isan’ny zava-dehibe indrindra ny fitodihana amin’ny fanatsarana ny lalàna momba ny fifidianana, ary isan’ny zava-dehibe ihany koa ny fanakaikezan’ny CENI ny antoko politika rehetra mba hahafahan’izy ireo mitondra soso-kevitra fanatsarana, indrindra fa eo amin’ny resaka lalàna sy pitsopitsony hafa. Niantso ny SADC mba hanohana hatrany amin’ny fametrahana nyfitoniana eto Madagasikara ihany koa ny praiminisitra mba hahafana miroso amin’ny ady amin’ny fahantrana.Nekena ho mpikambana vaovao eo anivon’ny SADC nandritra izao fihaonana tany Pretoria izao moa ny Nosy Kaomoro ary any Namibia indray ny fihaonana an-tampony faha 38 no hotanterahana amin’ny taona 2018.
Légende:Ny minisitry ny raharaham-bahiny Atallah Béatrice, ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly ary ny minisitry ny Indostria Chabani Nourdine nivory tanyPretoria.